Sunday October 14, 2018 - 11:57:41 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladaha reergalbeedka ayaa cadaadis dhanka siyaasadda ah ku saaraya maamulka Sacuudiga falkii lagu dilay saxafiga mucaaradka Jamal Khashoggi oo larumeysanyahay in dilkiisa uu amray Dhaxalsuge Max'med Bin Salmaan.
Ilo wareedyo dilumaasiyadeed ayaa sheegaya in intabadan dowladaha reergalbeedka oo ay ugu waaweynihiin Britain iyo Mareykanka ay qaadici doonaan ka qeybgalka shirka maalgashiga dhaqaalaha ee bishan gudaheeda ka furmaya Sacuudiga.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo xaliif dhow la ah maamulayaasha Aala Sacuud ayaa farriimo uu ku faafiyay bartiisa Twitterka ku sheegay in uu ciqaabi doono kuwii ka dambeeyay dilkii wariye Jamal Khashoggi.
Trump ayaa ciqaabta uu marsiinayo dowladda Sacuudiga ku sheegay in uu wax ka badeli doono heshiiskii dhanka hubka ah ee uu lasaxiixday Bin Salmaan oo ah wasiirka difaaca iyo dhaxal sugaha wadanka.
Dhinaca kale dowladda Turkiga waxay sheegtay in waqti dhow ay soo bandhigi doonto xaqiiqda qaabkii loo dilay Jamal Khashoggi iyo cidda dishay, Mowluud Daawuush Ooglu oo ah wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa dowladda Sacuudiga ku eedeeyay in uu diiday in baaritaan lagu sameeyo gudaha Qunsuliyadda ay uu ku leeyahay magaalada Istanbuul.